Kedu otu Alibaba si arụ ọrụ, kedu ihe ọ bụ na kedu ka ị si enweta elele ya? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ Alibaba na olee otu o si arụ ọrụ
Susana Maria Urbano Mateos | | Eziokwu na akụkọ, eCommerce
Kedu ka Alibaba si arụ ọrụ? Ibtù Alibaba na-adọta ọtụtụ nlebara anya na mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbe ha wepụsịrị ya onyinye kasịnụ izizi e nyere na akụkọ ntolite. IPO ya na United States kpalitere ijeri $ 25, na-ere ahịa ndị ọzọ iji gboo mkpa.
Ọ bụ ezie na anya ndị a niile dị na Alibaba, e nwere ọtụtụ echiche gbasara otu esi eme na ihe Alibaba na-eme nke na-esiri ọtụtụ ndị mmadụ ike. M ga-agba mbọ dokwuo anya ụfọdụ isi echiche nke ụlọ ọrụ a dịka ihe bụ Alibaba na olee otu o si arụ ọrụ.
1 Gini bu alibaba?
2 Kedu ka Alibaba si arụ ọrụ?
3 Alibaba abughi uzo nke Amazon nke Amazon ma obughi ulo ahia ahia
4 B2B nke Alibaba bụ obere akụkụ nke azụmahịa ha
5 Alibaba na Google kesara ụfọdụ atụmatụ
Gini bu alibaba?
A na-ewere Alibaba dị ka Ndi ahia ahia nke China. Jacklọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na 1999 site n'aka Jack Ma site na mwepụta nke Ecommerce saịtị Alibaba.com. Saịtị a jikọtara ndị na-eweta ngwa ahịa nke ndị China maka ihe ọ bụla na ndị na-azụ ahịa ịntanetị.
Kemgbe ọ malitere na oge ugbu a, Alibaba agbasawo site na nyiwe e-commerce ndị ọzọ dịka Tmail na Taobao. Ndị na-enyocha akụnụba na-akọwa nye ndị China Ecommerce ibu dị ka ngwakọta n’etiti Amazon, eBay, PayPal na ụfọdụ Google.
Ihe na-atọ ọchị bụ na Alibaba enweghị onye America ibe ya na-achịkwa obere ahịa, na ihe dị ka 80% nke ire ere ahịa n'ịntanetị sitere na mba ahụ kpọmkwem. Iji bụrụ ihe ziri ezi, Alibaba bụ ụlọ ọrụ nchịkọta nke ụlọ ọrụHa na-aru oru n’okpuru uzo ahia di iche-iche na uzo esi enweta ego.
Kedu ka Alibaba si arụ ọrụ?
Isi ahia atọ nke A haziri Alibaba Group dị ka ụlọ ọrụ dị iche iche, n'ụzọ dị ka anyị nwere:
Ọ bụ azụmahịa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, a na-ewere dị ka ikpo okwu azụmahịa nke ụlọ ọrụ ndị China na-ezute ụlọ ọrụ mba ụwa chọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ndị nrụpụta. Ọ bụ ihe yiri ihe Amazon mere na nkwekọrịta dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere.
Ihe na-adọrọ mmasị n’ebe a bụ na n’adịghị ka Amazon, Alibaba.com enweghị ngwa ahịa ma ọ bụ sonye na lọjistik dị ka nchekwa, ọkọnọ ma ọ bụ mbupu. Nke ahụ bụ, ụlọ ọrụ ahụ na-enweta uru site na ịnweta ọrụ maka azụmahịa ọ bụla, na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ ndenye aha na ndị na-ere windo na ahịa.
Ikpo okwu a na-egosikwa na ebe nrụọrụ weebụ 1688.com, nke a jikọtara azụmaahịa dị na China na AliExpress, maka ndị na-azụ ahịa azụmaahịa mba ụwa.
Ọ bụ azụmahịa kachasị ukwuu nke Alibaba Group, nke bu isi ahia ahia na ndi ahia, dika eBay. Isi ihe dị iche bụ na Taobao anaghị akwụ ụgwọ azụmahịa. Kama nke ahụ, ọ na-akpata ego site na ire mgbasa ozi, dị ka ihe Google na-eme.
N'ụzọ dị otú a ndị ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ iji tinye ngwaahịa ha na ihe kacha mkpa, nweta visibiliti maka ngwaahịa ha ma ọ bụ rute ọtụtụ ndị ahịa site na mgbasa ozi ọchụchọ.
N'okwu a, ọ bụ ụlọ ọrụ kewapụrụ na Taobao iji kwado onwe ya dị ka a Adịchaghị ahịa site na azụmaahịa na ndị ahịa, lekwasịrị anya karịsịa na-eto eto n'etiti klas. N'ihi ya, ọ nwere ngwaahịa nke ọkwa kachasị elu, akara mba kachasị mma, na mgbakwunye na ịkwụ ndị ahịa ya ụgwọ kwa afọ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Otu Alibaba na - eweputa onu ahia ha site na ulo oru ato a na anyị nwere nkọwa zuru ezu, ụlọ ọrụ ahụ na-enwetakwa ego site na azụmaahịa ndị ọzọ.
Juhuasuan, nke bu saịtị ahia ndi Groupon dika flash
Alipay, usoro ịkwụ ụgwọ nke dịkwa ka ụdị azụmahịa azụmahịa PayPal
Alibaba Cloudgwé ojii Computing
Laiwang, ngwa izipu ozi ekwenti na mpi na Tencent's WeChat
Aliwangwang, nke bụ ọrụ izi ozi ozugbo
Sina Weibo, nke bu nke China dika Twitter
YouKu, nke China nke YouTube
Na mgbakwunye, o nwekwara azụmaahịa ihe nkiri, yana otu egwuregwu bọọlụ na ego eji enweta ego.
Na-akpali na-kwuru na Alibaba adighi adabere na uzo ozo ebe obu na inwere ike iweputa ego otutu uzo ahia. Ka ọ dị ugbu a, Alibaba na-enye microcredits ma na-esonye na mmemme gọọmentị China maka imepụta ụlọ akụ nkeonwe ise na ntọala n'ụfọdụ obodo kacha mkpa na China.
Ndị mmekọ Alibaba na-achịkwa ya, usoro ịkwụ ụgwọ enyerela ụlọ ọrụ ahụ aka inweta ọtụtụ ozi gbasara obere azụmaahịa na China, ndị na-azụ ahịa, yana azụmahịa ha na-eme n'ịntanetị. Mana ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu ịbụ nnukwu ikpo okwu e-commerce kasị ukwuu na China, ọ na-eche asọmpi siri ike ka ọtụtụ ndị ahịa China na-eji ekwentị ha.
Anyị amatala etu Alibaba si arụ ọrụ mana na isi ihe ndị a anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe nzuzo ndị ọzọ maka ọganiihu ya n'ụwa niile.
Alibaba abughi uzo nke Amazon nke Amazon ma obughi ulo ahia ahia
N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, Alibaba abụghị «ụlọ ahịa dị n'ịntanetị»N'ihi na ọ naghị ere ngwaahịa, kama ọ na-arụ ọrụ nnukwu ahịa ahịa n'ịntanetị (Taobao y Obere) Ebee nde ndị ahịa na ụdị Ha tinyere windo ha ma resị ha ngwaahịa.
N'echiche ahụ, ụdị Alibaba yiri nke ahụ eBay na Dị ka ya, Alibaba na-enweta akụkụ nke ego ya site na ụgwọ ọ metụtara azụmahịa Tmall. N'adịghị ka eBay, Alibaba na-enweta ego site na mgbasa ozi na saịtị ịzụ ahịa ya, Taobao na Tmall. N'ihi nke a Nchikota nke mgbasa ozi na isslọrụ, Alibaba bara uru karịa ndị na-asọmpi ya. Ugbu a na ịmara ihe Alibaba bụ, ka anyị hụ ụdị azụmaahịa ya.
B2B nke Alibaba bụ obere akụkụ nke azụmahịa ha
Mgbe ị na-achọ «Alibaba»en Google, otu n’ime weebụsaịtị izizi webatara bu Alibaba.com. Nke ahụ bụ ọnụ ụzọ nke onye guzobere ya, Jack Ma, malitere na 1999, mgbe ụlọ ọrụ malitere. Ọ bụ Portal raara nye B2B na jikọtara ndị nrụpụta China na ndị ahịa si mba ofesi.
Otú ọ dị, ọnụ ụzọ a B2B bụ ihe dịtụ pequeña nke arụmọrụ Alibaba Group, ma e jiri ya tụnyere ahịa ya B2C nke Taobao na Tmall, ndị na-agbakọba ọtụtụ narị nde ndị ọrụ ha na-anọchite anya ọtụtụ ego gị.
N’agbanyeghi Taobao na Tmall bụ aha ụlọ na China, ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ahịa China anụtụbeghị banyere ha n'ihi na ọtụtụ ọrụ na saịtị ndị a bụỌ bụ naanị ndị na-asụ Chinese.
Alibaba malitere Taobao na 2003 y Tmall na 2008, na ha abụọ na-achịkwa e-commerce B2C China ugbu a. Ahịa ndị a mepụtara na 2013 248 otu ijeri dollar na azụmahịa, ọnụ ọgụgụ ibu karịa Amazon na eBay ọnụ.
Alibaba na Google kesara ụfọdụ atụmatụ
Taobao na Tmall nwere nke ha onwe ya search engine, nke Alibaba nyere ma na-enyere ndị ahịa aka ịchọ ngwaahịa. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị ahịa na-ere na Taobao na Tmall na-esonye isiokwu auctions, yiri nnọọ ka ụlọ ọrụ si emefu ego na Google.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye na-azụ ihe banyere na a isiokwu ka «calculator«, Nsonaazụ ọchụchọ na-egosi ngwaahịa nke ndị na-ere ahịa bụ ndị mere ọnụahịa kachasị elu (maka isiokwu a) kachasị anya, ndị ọzọ na-esochi. Ọrụ a yiri nke AdWords site na Google.
Chọọ na njikọ ya na mgbasa ozi na - eweta ego buru ibu maka Alibaba, ebe naanị Taobao nwere gburugburu Ulo oru 7 Ha na asọmpi na-asọ mpi iji dọta uche ndị na-azụ ihe ha.
Ugbu a na ị maara ka Alibaba si aru oruAnyị nwere olile anya na ọ bụ ihe doro anya bụ ihe nnukwu dike China a na-anaghị akwụsị ito bụ na otu o si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Kedu ihe bụ Alibaba na olee otu o si arụ ọrụ
mmụọ ozi pacheco dijo
Ndewo, ọmarịcha ọkwa. Ana m ede ihe iji chọpụta ma ọ bụrụ na, dabere na ihe ọmụma gị, ị nwere ike ịdụ m ọdụ na nke bụ ụzọ ọnụ ụzọ ebe m nwere ike ịdebanye aha ụlọ ọrụ na iwepụta ọrụ maka ire ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ndị a na ọnụ ụzọ ndị a kwuru. Ihe Nlereanya. Ka e were ya na m debara aha na alibaba na maka azụmahịa ọ bụla m tinyere na ọnụ ụzọ a, m na-ewepụta ọrụ maka ọrịre ọ bụla azụmaahịa a nwere. Daalụ
Zaghachi angel pacheco
Ọ ga-amasị m ịma otu m ga - esi eme iji nweta alibaba
Kedu uru m ga - enweta ma ọ bụrụ na m debanye aha? alibaba
Zaghachi ka salo
ELENA CASTLE dijo
Achọrọ m ịbụ kọmishọna alibaba
Zaghachi ELENA CASTILLO
Etu ị ga-esi gbaa ụlọ ọrụ dị na Alibaba akwụkwọ na-ere ngwaahịa adịghị mma ma anaghị edozi ndị ahịa
Zaghachi Jaime Quintanilla
Kedụ ka m ga - esi bido zụọ ngwaahịa gị na otu esi atụkwasị obi?
Achọrọ m ịmalite n'ire akpụkpọ ụkwụ na ego ole ka m chọrọ
Nzaghachi nye delia de leon soriano
Ndewo Mtụtụ ụtụtụ kedu ka m ga-esi zụta ngwaahịa
Zaghachi FRANK RUIZ
Ikechukwu okonkwo dijo
Ndewo M hụrụ isiokwu gị n'anya, ma taa ewezuga gị na-ekele gị na ọrụ gị, Achọrọ m ịnye gị maka ire ere. 30.000.000 OF AURICOIN CRYPTOCURRENCY SALE RELE nke Onye ọ bụla B $ $ 100 Onye ọ bụla, Ahịa ma ọ bụ Ahịa Ahịa BAGE $ 888,88 Onye ọ bụla na-azọpụta $ 788,88
M na-ere 30.000.000 nke AURICOIN maka $ 100 KWA OSEA ngụkọta ego nke $ 3.000.000.000 EGO DOLLARS NA-anabata NA ego, PROPERTIES BOGOTA, SPAIN, DOMINICAN REPUBLIC NA VENEZUELA AIRCRAFT NA-AKA NA-EGO. nke ugwo
Ana m akwụ ụgwọ ọrụ 10% maka onye ị na-arụ ọrụ na-enyere m aka ire ha…. EKELE NA EKELE MARA M enyemaka gị +584142896282
Zaghachi jose fermin
Nnọọ. Ọ ga-amasị m ịmatakwu banyere ogo ngwaahịa gị na ihe m kwesịrị ịme iji nwee ike nweta ha ma bido obere azụmaahịa.
1. Kedu ihe nzọụkwụ site na ntinye iji banye azụmaahịa nke ịzụrụ na ire ihe
2. Mgbe ị na-azụta ngwa ahịa, ebee ka ọ ga-abụ?
3. Kedụ ka m ga esi enyocha etu m si azụ ahịa na ohere ọhụụ?
Zaghachi Antonio Reyes Herrador Paz
ekele ezigbo Ama m obi abụọ bụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụta a ọgba tum tum ka ihe atụ si United States
Ndewo, achọrọ m ịrụ ọrụ na azụmaahịa a wee mụta imepụtakwu ego, nnukwu a anaghị akwụsị itolite ebe a na Venezuela ọ dị mkpa.
Zaghachi Lisbeth Zerpa de Vera
Nche maka azụmahịa Ecommerce gị
Jiri ụlọ ahịa Facebook wuo ụlọ ahịa gị n'ịntanetị!